Gbasara Anyị - JINHUA ZHONGSHENG FIBER PRODUCTS Co., Ltd.
Maa na - a nuomi ngwaahịa kacha mma n'ụwa niile kemgbe 2007
Anyị na-eme ngwaahịa anyị site na iji bagasane okpukpo biodegradable ma chepụta ha ka ọ bụrụ nke azụmahịa nwere ike ịghasasịa mkpo nri, ebe a nabatara. Compostables bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị na - eji otu nri na - emetọ nri, na - enye ohere ka ihe oriri ghara iru ihe mgbaru ọsọ ha.
———————— Mmepụta anyị ————————
Anyị na-eji okpete bagasse dị ka akụrụngwa emepụta ngwaahịa anyị.
Na mmezu ya, ZZ ECO Ngwa ahia na-agbanwe n'ime ụlọ azụmahịa, ebe anabatara.
———————— Mmepụta ————————
Mgbe nyochachara nke ngwaọrụ, site na usoro dị iche iche, iji chịkwaa njikwa ngwaahịa, anyị ga-ebugara ndị ahịa ngwaahịa.
———————— Pogbakọ ọnụ ————————
Ndị otu anyị na-agba mbọ inye ndị ahịa ihe ngwọta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ijere ndị ahịa ozi bụ ebumnuche anyị. Ngwa ahịa ZZ Eco ga - ewetara gị ntụsara ahụ, ọ ga - abụ nhọrọ kachasị gị mma. Creatmepụta ebe obibi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ọrụ dịịrị onye ọ bụla. Ka anyị họrọ ngwaahịa a na-acha akwụkwọ ndụ ma mee ụwa ka mma.
———————— Asambodo ————————
———————— Akuko anyi ————————
Capacity nweta ikike nke ikike site na ihe eji eme ihe, na-enweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa site n'ọdịdị kwụsiri ike. Anyị na-ejikwa njikwa ngwaahịa agbadoro anya mgbe niile dị ka ọkọlọtọ BRC (anyị nwere asambodo nke BRC, NSF, OK COMPOST, BSCI, FDA, wdg), ma na-eme ike anyị niile iji gboo ihe ndị ahịa ọ bụla chọrọ nke ọrụ, ụdị ihe eji achọ mma, ọrụ nka na ndị ọzọ. akụkụ. Ugbu a, a na-ere ngwaahịa anyị n’ụwa niile.
N'ikwekọ na ndị ahịa dị ka etiti ahụ, ndị ọrụ dịka akụnụba, otu anyị na-emelite akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, ihe ọhụrụ na ihe na-aga n’ihu. Zhongsheng Group wepụtara onwe ya ịbụrụ ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ na-akpụzi agwa.